Fivorian` ny parlemantera Ho voaboasana ny LFI 2021
Tsena-barom-panjakana Be ny teny midina ka mahatonga ny kolikoly
Tsy vitsy ireo velon-taraina noho ny kolikoly momba ny tsena-barom-panjakana. Misy aza ny tsena tsy hanaovana tolotra mihitsy fa ifanarahana fotsiny amin` izao. Misy ireo mpandraharaha sasany nahazo tsena nefa tsy nahafeno fepetra takiana amin` ny bokin` andraikitra
Orinasa Kraomita Malagasy Miha ratsy ny tantara
Taorian’ny fandalovan’ny tale jeneralin’ny orinasa Kraomita Malagasy, Nirina Rakotomanantsoa, tany amin’ny toeram-pitrandrahana any Brieville, herinandro mahery izay,
Ministeran'ny Toekarena sy Fitantanam-bola Nentanina momba ny fitsipi-pitondran-tena ireo mpiasa
"Aleo miasa mafy toa izay tsy an'asa. Koa hajao ny asanao ary indrindra hajao ireo olom-pirenena tonga misitraka ny asanao". Izay no fehin'ny fitsipika napetraka ho an’ny mpiasa,
Sehatra manara-dalàna Sakana ho an`ny fampandrosoana ny firenena
93%n` ireo sehatrasa eto Madagasikara dia voasokajy ho tsy ara-dalàna. Tanora maro no misehatra amina asa tsy ara-dalàna (emplois non déclarés).
Ny IFC izay vondrona anatin’ny Banky Iraisam-pirenena ary efa nampiasa vola hatrany amin’ny 250 tapitrisa dolara ny amin’ny fanohanana ny sehatra fambolena, ny fotodrafitrasa, ny angovo, ny banky ary ny fandraharahana. Tanjona ny hanohanana an’i Madagasikara amin’ny fampandrosoana ara-toekarena ary hanafainganana ireo dosie mahakasika ny fandraharahana, indrindra ny amin’ny lafiny angovo, ny fotodrafitrasa ary ny agro-indostria. Isaky ny tetikasa tohanana dia tokony hiantraika amin’ny tsirairay, indrindra ireo tanora manana vina hanangana orinasa na hivarotra vokatra ny tosika ataon’ny IFC hoy Atoa Lankes. Efa nihaona tamin’ny tompon’andraikitra ambony maro tahaka ny filoham-pirenena, ny praiminisitra , ny governoran’ny Banky Foibe ary ireo minisitra vooakasiky ny tetikasa ny tenany ary nanambara tamin’ireo hatrany ny tokony hilofosan’i Madagasikara hampiroborobo haingana ny sehatra tsy miankina indrindra ny mahakasika ny angovo, ny fitaterana ana habakabaka ary ny fambolena. Nisy ihany koa ny fihaonana tamin’ireo mpandray anjara rehetra amin’ny sehatra tsy miankina sy ireo mpamatsy vola hafa manosika an’i Madagasikara. Tamin’ny diany farany moa dia niaraka tamin’ny minisitry ny fambolena, Lucien Ranarivelo Atoa Lankes nijery ny fizotran’ny tetikasa BOVIMA izay novatsiana vola nanamboarana abatoara manaraka ny fenitra iraisam-pirenena any Fort Dauphin.